नवनिर्वाचित महामन्त्रीहरु भन्छन्- बदलिएको र बलियो कांग्रेस बनाउने आकांक्षाको जित Nepalpatra नवनिर्वाचित महामन्त्रीहरु भन्छन्- बदलिएको र बलियो कांग्रेस बनाउने आकांक्षाको जित
नवनिर्वाचित महामन्त्रीहरु भन्छन्- बदलिएको र बलियो कांग्रेस बनाउने आकांक्षाको जित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले पार्टीलाई विधिसङ्गत ढङ्गले सुदृढ बनाएर लैजाने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा विजय भएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै आज उनले आफूले महाधिवेशनमा पाएको मतलाई न्याय गर्ने र जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने बताए ।
उनले आफूसँग निर्वाचित भएका पदाधिकारीसँग मिलेर पार्टी सभापतिलाई काम गर्न तागत पुर्याउने र पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने उल्लेख गर्नुभयो । मत धेरै पाउनु भनेको विश्वास पनि धेरै पाउनु हो भन्दै उहाँले परिपक्व ढङ्गबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए ।
महाधिवेशनअन्तर्गत दुई महामन्त्री पदका लागि भएको मतदानको आज सम्पन्न मतगणनामा महामन्त्री पदमा थापा र शर्मा विजयी हुनुभएको हो । थापाले तीन हजार २३ र शर्माले एक हजार ९८४ मत ल्याएका थिए । त्यसैगरी महामन्त्रीका अन्य उम्मेदवार डा. प्रकाशशरण महतले एक हजार ५५६, प्रदीप पौडेलले एक हजार ३९३, डा. मीनेन्द्र रिजालले ८०९ र डा. राजाराम कार्कीले १०६ मत प्राप्त गरेको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । मतदानमा चार हजार ६८२ मत खसेकामा सबैभन्दा बढी मत थापाले ल्याएका हुन् भने शर्माले दोस्रो बढी मत प्राप्त गरेका छन् ।